Sajhasabal.com |के तपाई शुन्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा चाहनुहुन्छ ? यसरी दिनुस् आवेदन
के तपाई शुन्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा चाहनुहुन्छ ? यसरी दिनुस् आवेदन
फागुन १६, काठामाडौं । इन्टरनेशनल म्यानपावर रेक्रुटमेन्ट प्रा. लिले शुन्य लागतमा मात्र नेपाली श्रमिक पठाउन शुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा अनिवार्य रुपमा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा पनि इन्टरनेशनलले शुन्य लागतको प्रावधानलाई व्यवहारमै कार्यन्वयनमा लगेको जनाएको छ ।
शुन्य लागतमा पनि म्यानपावर कम्पनीले विदेश पठाउन सक्छ र ? तपाईलाई विश्वास नलाग्न सक्छ किनकी अहिलेसम्म नेपालबाट विदेश जाने भनेकै लाखौँ खर्च गरेर मात्र जान पाइन्छ भन्ने नै छ । तर यो मान्यतालाई तोड्दै यस म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट सेवा शुल्क नलिई रोजगारदाता बाट नै आफ्नो सेवा शुल्क लिएर विदेश पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको हो ।
वैदेशिक रोजगारीमा स्वच्छ भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै शुन्य लागतको अवधारणालाई व्यवहारमै लागू गरेर देखाउने प्रयासमा लागेको म्यानपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
अहिले कुन कुन डिमाण्ड छन् ?
यस म्यानपावर कम्पनीमा अहिले कतारको EDLINE CONTRACTING, DECORATION & GARDENS PLANNING.को लागि कार्पेन्टर १९ जनाको डिमाण्ड रहेको छ । वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालय ताहाचलबाट २०७७ फागुन १० गते कार्पेन्टर लागि पुर्व स्वीकृति लिएर विज्ञापन गरिएको छ । कार्पेन्टर को न्यूनतम मासिक तलब ३८ हजार २१० रहेको छ भने खान र बस्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दन ।
श्रमिकबाट नभई रोजगारदाताबाट नै म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क आउने भएकोले यो कम्पनीमा कतार जाँदा म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क तिर्नुपर्दैन । स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, म्यादी जीवन बीमा र अभिमुखीकरण तालीम बापतको शुल्क लगायत सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्ने म्यानपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
फागुन १८ गते गते म्यानपावर कार्यालय ग्वाकोंमाअन्तर्वार्ता हुने कम्पनीले जनाएको छ। कोमिड-१९ को रोकथाम प्रकिया र सामाजिक दूरी कायम गरी श्रमिक छनौट अन्तर्वार्ता संचालन गरिने जनाइएको छ ।
यो डिमाण्डमा आवेदन गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला
त्यस्तै यहि म्यानपावर कम्पनीमा कतारको COMPASS CATERING SERVICES W.L.L कम्पनीको लागि ८० जना लेवरको डिमाण्ड (लट नम्बर २३६३१०) रहेको छ । ६५ पुरुष र १५ जना महिलाको डिमाण्ड रहेको लेवर पदका लागि मासिक तलब रु. ३१ हजार ८४० तलब रहेको छ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कामको अनुभव भएको, शारीरिक रूपमा स्तस्थ र तन्दुरूस्त हुनुपर्ने, अंग्रेजी र हिन्दी बोल्न सक्ने हुनुपर्ने र २३ देखि ३५ बर्ष सम्मको उमेर भएका व्यक्तिहरुले आवेदन दिन सक्ने जनाइको छ । स्वदेशमा गरिने मेडिकल खर्च र अभिमुखीकरण तालीम बापतको शुल्क बाहेक अन्य सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएकोले म्यानपावर कम्पनीलाई अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
आवेदकहरुलाई कुनै मध्यस्थकर्ता वा विचौलियाको प्रयोग बिना सिधा आवेदन गर्न आमन्त्रित गरिएको छ । आवेदक वा आवेदकका परिवारका सदस्यहरुले यस भर्तिको लागि कुनै प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्नेछैन । अझ रोचक त के छ भने यदि कोहि कसैले कुनै एजेन्ट वा कर्मचारीलाई रकम दिएको/मागेको शंका लागेमा उक्त व्यक्तिलाई थप सोधपुछ गरिनेछ साथै अनाधिकृत रुपमा रकम लिने त्यस्ता व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार हुने सजायको बारे बताएर सचेत गराइने मात्र होइन म्यानपावर कम्पनीलाई रकम तिरेको वा नतिरेको आवश्यक छानविन गर्न म्यानपावर कम्पनीले नै वैदेशिक रोजगार विभागलाई अनुरोध गर्दछ । जसले गर्दा तपाई ढुक्क भएर वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउनुहुन्छ ।
ईन्टरनेशनल म्यानपावर रिकुटमेन्ट (आईएमआर) को कुनै मध्यस्तकर्ता तथा शाखाहरू छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरुबाट आईएमआरले कुनै पनि शुल्क भुक्त्तानी गर्दैन । यसको मतलब कुनै पनि भर्ती शुल्क नलाग्ने प्रकिया शुल्क नलाग्ने तलब कटौती नहुने नगद जम्मा गर्नु नपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु नपर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
अबैध भतीकर्ताहरूदेखि साबधान रहनुहोला । कृपया धोखाधदी, अबैध कियाकलाप वा भ्रष्टाचारको विरुद्ध आईएमआरको स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष हटलाइन नं +९७७ १८०११३७७६९ वा [email protected] ईमेलमा रिपोर्ट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । हामी तपाईको गोपनीयताको सुनिश्चित राख्नेछौं ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट गराइएको जानकारी
१. आफ्नो नाममा मिसा प्राप्त भईजाने निश्चित भएपछि मात्र कम्पनीमा गई रकम बुझाउनु होला । बुझाएको रकमको भौचर अनिवार्य लिनुहोला ।
२. आफु काम गर्न जाने मुलकामा रहेको नेपाली कुटनीतिक नियोगको सम्पर्क ठेगाना र फोन नम्बरहरु साथमा राख्नुहोला । आफु कठिनाईमा पर्दा सजिलो हुन्छ ।
३. यस विज्ञापन सूचनामा उल्लेख भएको भन्दा बढी रकम कसैलाई नदिनहोला ।
४. विदेश जानुअघि अभिमुखीकरण वा इडवरान तालिम अनिवार्य लिनुपने छ ।
५. विदेश जानुअघि आफु जाने मुलुक, काम दिने कम्पनी, पाउने सेवा तथा सुविधा र अन्य सर्तबारे राम्रोसंग पढेर मात्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु होला र सो को एक प्रति आफुसंग राख्नुहोला ६.काममा विदेश जाँदा नेपालको विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोला अन्यथा ठगिने सम्भाव्यता हुन्छ ।
७. यस विज्ञापन सम्बन्धमा थप केहि बुझ्नुपरेमा वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्कको लागि :
इन्टरनेशनल म्यानपावर रेक्रुटमेन्ट प्रा. लि
फोन: ०१-५२०४३४६, ०१-५२०४३४७ , ०१-५२०४३४८, ९८५१००१६००